Energy Energy 8 G2 Wood, anyị nyochaa ihe ndị kasị maa mma ụda ụlọ elu Energy Sistem | Akụkọ akụrụngwa
Energy Tower 8 G2 Wood, anyị na-enyocha ụlọ ọrụ kachasị mma nke Energy Sistem
Anyị laghachiri na ebubo anyị nyocha kwa izu, oge a anyị laghachiri na ngwaahịa nke Ike usoro, Spanishlọ ọrụ Spanish ahụ kpebisiri ike ime ka ọtụtụ ngwaahịa dị na United States, ruo ugbu a, ọ na-esiri ha ike ịnweta onye ọrụ nkịtị, nke a bụ otú ha si mee ka ụlọ elu ụda ha ghọọ ndị na-ebu ngwaahịa na Spain.
Anyị nwere aka anyị ịmegharị nke otu n'ime ụlọ elu ụda nke na-enye nguzozi kachasị mma n'etiti mma na ọnụahịa na ahịa, Towerlọ Energy Energy 8 G2 Wood. Echefula nkọwa niile nke ngwaahịa a na anyị ma chọpụta ihe kpatara ya 120 W nke ike na njikọta ama ama.
Eleghị anya ị tụleghị ya, mana jiri nlezianya gụọ nyocha a, n'ihi na mgbe ị matara ngwaahịa ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ otu n'ụlọ. Towlọ elu dara ụda bụ ihe ziri ezi n'etiti oghere, imewe na njikọta, na-enweghị isi ike ma ọ bụ na-eme mkpọtụ n'ụlọ anyị. Dị ka ọ na-adị mgbe niile, anyị na-eji akụkụ dị oke mkpa aga ebe ahụ.
1 Design: Osisi dị na arịa ụlọ, gịnị kpatara na teknụzụ
2 Nka na ụzụ: will gaghị akọ ụda ma ọ bụ mma
3 Njikọta: Ngosipụta na nkasi obi, ngwaahịa maka ụlọ
4 Ahụmịhe onye ọrụ yana uche onye editọ
Design: Osisi dị na arịa ụlọ, gịnị kpatara na teknụzụ
Anyị elekwasịwo anya na plastik na ọla dị ka ihe ndị kachasị kpochapụla maka ụdị ngwaahịa a mana ... gịnị ma ị gaghị eji osisi pụta ma si otú a gboo mkpa nke ndị nwere ụlọ ha n'ụzọ nke oge gboo? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Energy Sistem chere mgbe ọ na-edezigharị ya Towerlọ elu Energy Tower 8 G2. Ọma, Ewubere na conglomerate dị ka ndị ọzọ iji nye ụda mkpọtụ na-enweghị atụ, ugbu a, ha ekpebiela ịkwado ya na osisi site n'elu ruo ala, wee si otú a na-enye ọmarịcha atụmatụ mgbe ọ dabara na arịa ụlọ ndị mara mma na ala parquet. Ihe ịga nke ọma dị mkpa, ebe ọ bụ na tupu ngwaahịa ndị a, anyị enweghị nhọrọ ọ bụla karịa ịhọrọ n'etiti oji na ọcha, nke na - ewepụta ụcha agba dị iche iche n'ime ime ụlọ ahụ. Nkà na ụzụ na imepụta ihe anaghị ekwukarị ibe ha.
Towerlọ elu a 8 G2 nke Energy Sistem na-enye anyị elu nke 105 centimita na obosara na ogologo nke 17 na 22 centimeters n'otu n'otu, nke dị n'ime olu ọ na-ejide ma dị elu nke ukwuu ka anyị wee nwee ike iji ya na-enweghị ọtụtụ nsogbu postural, n'ogo aka n'aka ọtụtụ ndị ọrụ.
Na mgbakwunye, iji kwado okwu ahụ, a na-ahazi bọtịnụ bọtịnụ n'ụdị ogwe elu n'elu mgbe N'ihu anyị na-ahụ ihe nlele LCD na ụda olu ga-enye anyị ozi bụ isi banyere ihe anyị na-egwu na olu ya. Isi ihe iji gosipụta bụ na onye nlere anya LCD na-agbanyụ mgbe anyị na ya anaghị emekọrịta ihe, na-enye atụmatụ mara mma na nke na-enweghị atụ, ọ dịghị onye chọrọ ihuenyo ahụ n'oge niile, enwerekwa nkọwa zuru ezu.
Nka na ụzụ: will gaghị akọ ụda ma ọ bụ mma
Sistem Energy na-ekwe anyị nkwa usoro ụda Hi-Fi - nnukwu ntụkwasị obi- ya na ikike zuru oke nke 120W n'ihi njikọta nke ndị na-ekwu ya. Ya mere, anyị nwere ọkà okwu 1,5W nke anụ ọhịa 10, anụ ọhịa ndị ọzọ dị 4-inch na 30W na n'akụkụ nke kachasị ama, 6,5-inch 50W iji nye anyị 120W nke ike zuru ezu, Gaghị agbaghara kpamkpam ihe ọ bụla gbasara usoro nduzi na mma. N'otu ụzọ ahụ, ha echebarala mmelite nke bass ahụ na ogwe osisi yiri nke silk na ndị na-ekwu okwu n'ihu na azụ azụ nke na-abawanye bass ahụ. Agbanyeghị, ọ ga-adịrị onye na-azụ ahịa ụtọ, n'ihi na ụkwụ azụ ga-eme ka anyị nwee ike ịhazigharị bass wee daa ka ihe masịrị anyị, anyị agaghị echegbu onye agbata obi anyị oke ike.
Soundda olu na-adabere na ihe nhazi ụda dijitalụ 24-bit, 96 kHz, tinyere a 2-gbalaga analog nhazi na dị ka a n'ezigbo mmewere ya osisi now igbe n'ịwa ụda anyị na-atụ anya site na ngwaahịa a.
Njikọta: Ngosipụta na nkasi obi, ngwaahịa maka ụlọ
Anyị enweghị ike ịkwụsị oke ụlọ dị ka nke ahụ na enweghị njikọta, ọ ga-abụ ntugharị na-agagharị, na Energy Sistem anaghị eme ụdị arụrụala a na ụwa nke teknụzụ. Anyị nwere ihe niile a dị:
S / PDIF ngwa ngwa ntinye ntanetị
Ntinye analog RCA
Ihe ntinye analog 3,5 mm jaak
RCA stereo analog mmepụta
Ntinye kaadị MicroSD
Anyị na-ekwusi ike na ọ nwere Bluetooth, ọ bụ ezie na ọ bụ opekempe chọrọ. Ihe na-adịghị obere bụ eziokwu na anyị nwere ike ịnweta egwu na-adịghị n'ịntanetị site na onye na-agụ kaadị ya microSD ma ọ bụ ntinye ya na njikwa multimedia maka USB - anyị ekwesịghị iji ya kwụọ ngwaọrụ n'ihi na ọ bụghị nzube ya. N'ihi nkwado ya n'elu maka mbadamba na ekwentị mkpanaaka, anyị nwere ike ọ fọrọ nke nta ka ọ ghọọ a multimedia center.
Gbakwunyere dị ka ntinye analog ma obu FM Radio Ha kariri iwepu anyi na ngwa ngwa, nke bu eziokwu bu na ole na ole n'ime anyi jiri ya taa, mana ha emerughi aru. Gịnị ma ọ bụrụ na e mere ya maka ihe kachasị mma bụ mmepụta ọdịyo dijitalụ ya, Nke a pụtara na, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ijikọ ya na telivishọn iji nwee usoro ọdịyo dị elu n'ime ime ụlọ ahụ, ọbụnakwa na PlayStation 4.
Ahụmịhe onye ọrụ yana uche onye editọ
Anyị na-enweta otutu ihe ọ juiceụ juiceụ Towerlọ Ike 8 G2 osisi, na eziokwu bụ na anyị hụrụ ya n'anya. M ga-ekwu na nke Energy Sistem nso nke ụlọ elu ụda ọ bụ ọkacha mmasị m na usoro nke imewe na ohere. O nwere otutu ike na otutu odiyo na adabaghi ​​n’ime ihe ngosi, nke ahu n’eme m ihunanya. O doro anya na ọ bụghị ihe dị ọnụ ala karịa na nso nso a, mana ọ bụ ihe kachasị mma ma dị elu nke oke ngwaahịa dị oke ọnụ.
Ogwe bọtịnụ roba
Ọ nwere a njikwa anya Dị ka m na-ekwu, ọ bụ ọkacha mmasị kachasị na ngwaọrụ eletrọniki ndị ọzọ iji rie ọdịnaya nke ọdịnaya anyị nwere n'ụlọ anyị. Nke a sụgharịrị ihe dị ka euro 150 dabere na isi ire ere anyị họọrọ, anyị amatalarị na anyị nwere ụlọ elu Energy Energy a Amazon, El Corte Inglés na weebụsaịtị wepụtara nke Energy Sistem, tinyere ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ elu ụda a haziri nke ọma nke nwere ike ikpuchi mkpa niile nke ebe obibi gị ma ọ bụ ebe ntụrụndụ, nke a bụ ngwaahịa m enweghị nhọrọ karịa ịkwado.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Energy Tower 8 G2 Wood, anyị na-enyocha ụlọ ọrụ kachasị mma nke Energy Sistem
eBay maka iOS na-enye anyị ohere i toomi barcode iji ree ngwaahịa
Amazon na-agba ụbọchị akwụkwọ akwụkwọ ụgwọ ego euro 30 na Kindle Pawerwhite na ego ruru 65%